Abafundi bakhala ngo-NSFAS | News24
Abafundi bakhala ngo-NSFAS
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaKungesikhathi kunesiteleka sabafundi ngoMsombuluko. e-Unisa.
ABAFUNDI besikhungo semfundo ephakeme i-Unisa sebefunge bagomela bathi angeke baze bayeke ukuteleka kuze kube izinkinga ababhekene nazo ziyalungiswa.
Laba bafundi bavuke umbhejazane ngoMsombuluko mhla zingama-28 kuMasingana (January) bavala umgwaqo uLangalibalele Street ngamathayi avuthayo.
Phakathi kwezikhalazo zabafundi kubalwa ukushiywa ngaphandle isikhwama esikhokhela abafundi i-National Student Financial Aid System (NSFAS) kanye nokungaqedelwa kokubhaliswa kwabo kule nyuvesi.
U-Andile Ndaba onguNobhala weSouth African Student Congress(Sasco) uthe u-NSFAS ushiye ngaphandle inqwaba yabafundi ngaphandle kwezizathu eziphathekayo.
Uthe u-NSFAS wathi ukuze uzokwazi ukuthi ukhokhele umfundi izifundo, kumele athole u-50% .
“Kunabafundi abathole ngisho ngaphezu kwalowo-50% akade bewufuna kodwa nabo bavalelwe ngaphandle. Kunabafundi abasha futhi abazoqala ukufunda kodwa namanje basalinde izimpendulo ku-NSFAS ekubeni kuvalwa ukubhaliswa maduzane.
“Sifuna ubulungiswa kubafundi bethu. Sifuna ukuthi uMnyango weMfundo ephakeme ezweni lonke usinake futhi usilalele. Sikhathele ukuthi njalo thina sihleli sivalelwa ngaphandle. Angeke size siyeke ukuteleka kuze kube izinkinga zethu zilungisiwe,” kubeka yena.
Kwenzeka isiteleka sabafundi nje, abasebenzi bakulenyuvesi nabo baqala isiteleka sabo ngoLwesihlanu olwedlule mhla zingama-24 bekhala ngamaholo.
Abasebenzi bafuna ukunyuselwa amaholo ngo-10% kanti uqashi yena ufuna ukubanyusela ngo-6%. NgoLwesihlanu olwedlule bekumele kuvalwe ukufaka izicelo zokufunda kulesi sikhungo. Abafundi akade bezofaka izicelo zokufunda babuyiselwe emuva.
Lokhu kube sekuphoqa inyuvesi ukuba ihlehlise usuku lokuvalwa kokufakwa kwezicelo zokufunda kule nyuvesi kube umhlaka-1 February.
UMnu Mxolisi Mkhize ongumkhulumeli wabasebenzi kulenyuvesi utshele i-Echo ukuthi bengabasebenzi abazimisele ngokubuyela emsebenzini umqashi engakahlangabezani nezidingo zabo. Uthe indlela ekwenzeka ngayo iyakhombisa ukuthi umqashi akabanaki.
“Izingxoxo zalamaholo zaqala ngenyanga kaMandulo (September) ngonyaka owedlule kodwa namanje akukafinyelelwa esivumelwaneni. Ngesikhathi izingxoxo ziqala besifuna u-12%, kodwa manje sesehlile kodwa umqashi akafuni yena ukwenyuka.
“ Ngesikhathi kuqala unyaka sisebenz ile sabasiza abafundi ngokufaka izicelo zabo zokufunda kodwa kuthe ngoLwesihlanu sabona ukuthi awukho umehluko emiholweni yethu kanti nokubhalisela ukufunda nako sekuzovalwa savele sabeka phansi amathuluzi. Umqashi uloku engaqedi ngezingxoxo ngoba ebona ukuthi siyaqhubeka siyasebenza ufuna ukuthi senze umsebenzi size siwuqede. Izingane siyathanda zona ukuzisisa ukuze zizofunda kodwa indlela umqashi asenza ngayo usedlala ngathi,” kubeka yena.
Uqhube wathi babe sebenquma ukuthi bavale amasango alenyuvesi ukuze abafundi bengeke bakwazi ukungena ngaphakathi ngoba bangahle balimaze impahla yenyuvesi ngoba befuna ukusizwa ngo ‘dli’.
NgoLwesihlanu lenyuvesi iqale yathumelela abafundi imiqhafazo ibatshela ngesiteleka esiqhubekayo sabasebenzi.
Okhulumela lenyusesi uMnu Siyabonga Seme ukuqinisekisile ukuthi kunesiteleka esiqhubekayo sabafundi kanye nabasebenzi.
“Sitshelwe ukuthi umqashi ufuna ukunikeza abasebenzi u-6% kodwa abasebenzi bona bafuna u-8.5%. Kunezingxoxo eziqhubekayo phakathi kwabasebenzi kanye nomqashi ukuzama ukuthola isisombululo,” kubeka yena.
Ephawula ngodaba lwabafundi uthe kunabafundi abakhokhelwa u-NSFAS abafuna ukuthi bavunyelwe ukuthi babhalisele ukufunda onyakeni ka-2020 nakuba kusanemali abayikweletayo yangonyaka owedlule. “Izikhalazo zabo sezifikile kubaphathi benyuvesi ukuzama ikhambi elinokuthula.”
Uthe asikho isinqumo esisathathiwe mayalana nokuhlehliswa kosuku lokuvalwa kokufakwa kwesicelo njengoba sekuphazanyiswe iziteleka.
Uthe bakhuthaza abafundi ukuba bafake izicelo zabo online. Besingekho isinqumo ebesesithathiwe ngesikhathi sokushicilela.